1 Ihe E Mere 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 21:1-30
21 Setan wee bilie imegide Izrel ma kpalie+ Devid ịgụ Izrel ọnụ. 2 Devid wee gwa Joab+ na ndị isi nke ndị ya, sị: “Gaanụ gụọ+ Izrel ọnụ malite na Bia-shiba+ ruo Dan+ bịa gwa m, ka m mara ole ha dị.”+ 3 Ma Joab sịrị: “Ka Jehova tụkwasịrị ndị ya otu narị okpukpu n’ole ha dị ugbu a.+ Onyenwe m eze, ọ̀ bụ na ha niile abụghị ndị na-ejere onyenwe m ozi? Gịnị mere onyenwe m ji na-achọ ime ihe a?+ Gịnị mere ọ ga-eji wetara Izrel ikpe ọmụma?” 4 Otú ọ dị, eze rụgidere Joab ime ihe o kwuru,+ Joab wee pụọ+ jezuo Izrel dum, e mesịa, ya abịa na Jeruselem.+ 5 Joab wee nye Devid ọnụ ọgụgụ ndị e debara aha ha n’akwụkwọ; Izrel niile dị otu nde na otu narị puku ndị ikom na-ebu mma agha,+ Juda dịkwa narị puku anọ na iri puku ndị ikom asaa ndị na-ebu mma agha. 6 Ma o debanyeghị aha Livaị+ na Benjamin n’akwụkwọ,+ n’ihi na ihe eze kwuru adịghị Joab mma. 7 Ihe a jọrọ njọ n’anya ezi Chineke,+ o wee gbuo ndị Izrel. 8 Devid wee sị ezi Chineke: “Emehiewo m+ nke ukwuu n’ihi ihe a m mere. Ma ugbu a, biko, gbaghara ohu gị njehie ya;+ n’ihi na ezuzuwo m nnọọ nzuzu.”+ 9 Jehova wee gwa Gad,+ bụ́ onye ọhụụ Devid,+ sị: 10 “Gaa sị Devid, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọ dị ihe atọ m ga-eme ka ha bịakwasị gị.+ Jiri aka gị họrọ otu n’ime ha, ka m mee gị ya.”’”+ 11 Gad wee bakwuru Devid,+ sị ya: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Họrọ nke ị chọrọ, 12 ọ̀ bụ ka e nwee ụnwụ+ afọ atọ; ka ọ̀ bụ ka ndị iro gị kpochapụ gị n’ihu ha ruo ọnwa atọ,+ mma agha ndị iro gị ewee nweta gị, ka ọ̀ bụ ka mma agha Jehova dakwasị gị ruo ụbọchị atọ,+ ọbụna ọrịa na-efe efe,+ n’ala gị, mmụọ ozi Jehova ewee weta mbibi+ n’ókèala dum nke Izrel.’ Gwa m ihe m ga-aza Onye zitere m.” 13 Devid wee sị Gad: “Ọ na-ewute m nke ukwuu. Biko, ka m daba n’aka Jehova,+ n’ihi na ebere ya dị ukwuu;+ ma ka m ghara ịdaba n’aka mmadụ.”+ 14 Jehova wee mee ka e nwee ọrịa na-efe efe+ n’Izrel, puku mmadụ iri asaa wee nwụọ n’Izrel.+ 15 Ezi Chineke zigakwara mmụọ ozi na Jeruselem ka o bibie ya;+ ngwa ngwa ọ malitere iweta mbibi ahụ, Jehova hụrụ ya wee malite inwe mwute n’ihi ọdachi ahụ.+ O wee sị mmụọ ozi ahụ nke na-eweta mbibi ahụ: “O zuola!+ Wetuo aka gị.” Mmụọ ozi Jehova guzokwa n’akụkụ ebe nzọcha mkpụrụ nke Ọnan,+ onye Jibọs.+ 16 Mgbe Devid leliri anya, ọ hụrụ mmụọ ozi Jehova+ ka o guzo n’agbata eluigwe na ụwa ma tụdo Jeruselem mma agha ya ọ mịpụtara amịpụta;+ Devid na ndị okenye, bụ́ ndị yi ákwà iru uju,+ wee gbuo ikpere n’ala ozugbo, kpudo ihu n’ala.+ 17 Devid wee sị ezi Chineke: “Ọ́ bụghị m kwuru ka a gụọ ndị mmadụ ọnụ, ọ́ bụghịkwa mụ onwe m mere mmehie, meekwa ihe ọjọọ?+ Ma gịnị ka atụrụ+ ndị a mere? Jehova bụ́ Chineke m, biko, ka aka gị bịakwasị m, bịakwasịkwa ụlọ nna m; ma ya abịakwasịla ndị gị,+ iti ha ihe otiti.” 18 Mmụọ ozi Jehova wee gwa Gad+ ka ọ gwa Devid ka Devid gbagoo gaa wuoro Jehova ebe ịchụàjà n’ebe nzọcha mkpụrụ nke Ọnan, onye Jibọs.+ 19 Devid wee gbagoo dị ka Gad gwara ya n’aha Jehova.+ 20 Ka nke a na-eme, Ọnan+ tụgharịrị hụ mmụọ ozi ahụ; ụmụ ya anọ, bụ́ ndị ya na ha nọ, zoro onwe ha. Ma Ọnan nọ na-azọcha ọka wit. 21 Devid wee bịarute n’ebe Ọnan nọ. Mgbe Ọnan lere anya hụ Devid,+ o si n’ebe nzọcha mkpụrụ ahụ pụta ozugbo wee kpọọrọ Devid isiala. 22 Devid wee sị Ọnan: “Nye m ebe a a na-azọcha mkpụrụ, ka m wuoro Jehova ebe ịchụàjà na ya. Nye m ya,+ m ga-akwụzu gị ego ya,+ ka ihe otiti+ a na-eti ndị Izrel kwụsị.” 23 Ma Ọnan sịrị Devid: “Were ya ka ọ bụrụ nke gị,+ ka onyenwe m eze meekwa ihe dị mma n’anya ya. Lee, m na-enye ehi+ ị ga-eji chụọ àjà nsure ọkụ ahụ nakwa ihe e ji etichapụta mkpụrụ+ ka e were ya mere nkụ+ nakwa ọka wit ka ọ bụrụ àjà ọka. M na-enye gị ha dum.”+ 24 Otú ọ dị, Eze Devid sịrị Ọnan: “Ee e, aghaghị m ịzụ ya azụ ma kwụzuo gị ụgwọ ya,+ n’ihi na agaghị m ewere ihe gị nye Jehova iji chụọ àjà nsure ọkụ n’emefughị ihe ọ bụla.” 25 Devid wee nye Ọnan ọlaedo dị narị shekel isii n’ịdị arọ maka ebe ahụ.+ 26 Devid wee wuoro Jehova ebe ịchụàjà+ n’ebe ahụ, chụọkwa àjà nsure ọkụ na àjà udo. O wee kpọkuo Jehova,+ bụ́ onye zara ya site n’ọkụ+ nke si n’eluigwe daa n’elu ebe ịchụàjà nke àjà nsure ọkụ ahụ. 27 Jehova gwakwara mmụọ ozi ahụ okwu,+ o wee mịghachi mma agha ya n’ọbọ. 28 N’oge ahụ, mgbe Devid hụrụ na Jehova azawo ya n’ebe nzọcha mkpụrụ nke Ọnan, onye Jibọs, ọ nọgidere na-achụ àjà n’ebe ahụ.+ 29 Ma n’oge ahụ, ụlọikwuu Jehova nke Mozis rụrụ n’ala ịkpa, tinyere ebe ịchụàjà nke àjà nsure ọkụ ya, dị n’ebe dị elu na Gibiọn.+ 30 Devid enweghị ike ịga n’ihu ya jụọ Chineke ase, maka na ụjọ ji ya+ n’ihi mma agha nke mmụọ ozi Jehova.
1 Ihe E Mere 21